သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Scrum မာစတာသင်တန်း - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Scrum မာစတာသင်တန်း
PSM, PSPO များအတွက် 2-2 နေ့ရက်များအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ။ ကန့်သတ်ထိုင်ခုံ !!!
သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်. အထူးအဘယ်သို့နည်း,
ထုတ်ကုန်များနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောတန်ဖိုးထုတ်ကုန်ပို့ဆောင်စဉ် Scrum, လူတွေရှုပ်ထွေးသပ္ပါယ်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်သည့်အတွင်းမူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Professional က Scrum Certificate (အလုပ်ရှင်နှင့်ရွယ်တူချင်းရန်သင့် core ကိုဆည်းခြင်းနှင့်ကြိုတင် Scrum အသိပညာသရုပ်ပြပါ။ Scrum လက်မှတ်ရှာမည်သူမဆိုလည်းသူတို့ရဲ့သင်တန်းများဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်)
ကျွမ်းကျင်သူလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းသဖြင့် interactive Sessions (၎င်း၏အတည်ပြုလက်မှတ်ရ Scrum လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းသဖြင့်ကောက်ယူသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံ, သင်တန်းမြှင့်တင်ရန်ကြောင်း interactive စာသင်ခန်းအစည်းအဝေးများ -! Scrum အတွက်အကောင်းဆုံးစိတ်)
အလုပ်ရှာဖွေရေးကြီးထွား (အားလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ scrum အလေ့အထများချမှတ်အနှံ့စျေးကွက်အတွက်ရှေ့ဆက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တည်နေရာအားဖြင့်သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကို Expand ။ developer များ & ထုတ်ကုန်ပိုင်ရှင်တွေနဲ့တူ Scrum အသင်းအဖွဲ့ဝင်များ PSM နှင့် PSPO အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်သည်)
Scrum အသင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သူများအဘို့အ Scrum မာစတာအဖြစ်အက်ဥပဒေ
ဆဲ Scrum ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးပှား
အခန်းကဏ္ဍ account မှတဆင့်ထိရောက်သောအသင်းစွမ်းဆောင်ရည်
Professional က Scrum Certificate သင်တန်း
အဆိုပါ PSM ငါ II နှင့် III ကိုအဆငျ့အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အွန်လိုင်းကျင်းပသည့်တစ်ဦးကိုတိကျခိုင်မာစွာအကဲဖြတ်အတွက်နိမ့်ဆုံးသွားတာရမှတ်ရယူအပေါ်အောင်မြင်နေကြသည်။
PSM ငါကိုင်ဆောင်သူနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အခြေခံနားလည်ပြီး, တကမ္ဘာလုံးကိုလက်ခံဝေါဟာရများကိုအသုံးပြုဖို့နိုင်ဖြစ်ကြပြီး Scrum မှချဉ်းကပ်။
PSM II ကိုကိုင်ဆောင်သူဟာ Scrum မူဘောင်များကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်စည်းရုံးရေးအခြေအနေတွင် Scrum လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောအခြေခံမူများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှုရှိသည်။
PSM III ကိုလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူ Scrum ကျော်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတစ်ပုံမှန်အဆင့်ကိုသရုပ်ပြပါ။
အဆိုပါ PSPO အွန်လိုင်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့်တိကျခိုင်မာစွာစာမေးပွဲနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာနိမ့်ဆုံးသွားတာရမှတ်လိုအပ်သည်။
PSPO II.Immediately အဆိုပါ (Scrum.org) လေ့ကျင့်ရေး post, ကျောင်းသားများလက်မှတ်အကဲဖြတ်ကြိုးစား၎င်းတို့၏ password ကိုပေးအီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ကျောင်းသား 14 ရက်အတွင်းအကဲဖြတ်ကြာအနည်းဆုံး 85% ဂိုးသွင်းမပါဘူးဆိုရင်, သူတို့သည်နောက်ကုန်ကျစရိတ်မှာတစ်ဦး 2nd ကြိုးပမ်းမှုခွင့်ရှိသည်။ စကားဝှက်အသစ်နှင့်အတူ 2nd က e-mail ကိုအလိုအလျှောက်ကျောင်းသားထံသို့စေလွှတ်လိမ့်မည်။
မိုးတိမ်ရန်သင့်အပေါ်-ဝုဏ်အတွင်းအခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးချဲ့ကြောင်းစပ်အိုင်တီဗိသုကာ Build ။
ကြွယ်ဝသောထိန်းချုပ်မှု, စာရင်းစစ်များနှင့်ကျယ်ပြန့်လုံခြုံရေးကိုအသိအမှတ်ပြု။ အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အစေခံ?